Gabdhaha Fircooniga ugudan & Habaabka Loogu Raaxayn Karo…. - Hablaha Media Network
HMN:- Salaaxista haweeneydu, kuma koobna oo qura labada naas, balse waxa loo baahan yahay in la salaaxo meelo kale oo jirka kamid ah sida; labadeeda warqood, gudaha bowdooyinka, gumaarka, faruuryaha cambarka, iwm.
Waxaan muran ku
jirin in haweeneyda ninkeeda ay jeceshahay uu labada cajar
dhexdooda kaga salaaxo mid kamid ah labadiisa gacmood,
isaga oo isla markaasi tan kale kaga salaaxaya labadeeda
naas, ay dareento istiin iyo raaxo labanlaab ah.
Kolka gacanta ninku ay soo maamusho naasaha iyo shafka
waxay u degtaa dhinaca caloosha, iyada oo
salaaxaysa rugta xuddunta, dabeetana u jiitamaysa dhanka
cajarrada iyo gumaarka, halkaasi bayna in muddo ah ku
noqnoqotaa. Intaas dabadeed, kolka ay haweeneydu si
wanaagsan istiinka u qaadato, labadeeda bawdo ayaa iskood u
kala kaca, faruuryaha waaweyn ee
cambarkuna waa ay kala
galmadu, waxay isu
rogayaan kuwo fudud
oo saxansaxo leh
heer ay mar kale kacsan karto. Isdhexgalkii xoogga ku dhisnaa
waxa uu isu beddelayaa is­habsiin jilicsan oo keenta inay
haweeneydu dareento in ninkeedu yahay gabbaadin aamin ah
oo ay dhaxanta iyo dhibaatada ka gasho. Halkaasi kolkay arrini
marayso ayay madaxeeda shafka ama garabka ka saarataa, jiif
iyo nasashana ku gunaanaddaa hawshii cuslayd ee ay qabatay